ဆန် ၁ ပြည် ကျပ် ၁၁၀၀ ထက်ပိုမရောင်းရန် ဆန်စပါးအသင်းချုပ် အရန်ဆန် ရောင်းချပေး – Burmese Online News
ဆန် ၁ ပြည် ကျပ် ၁၁၀၀ ထက်ပိုမရောင်းရန် ဆန်စပါးအသင်းချုပ် အရန်ဆန် ရောင်းချပေး
ဆန်လက်လီအရောင်းဆိုင်တွေအနေနဲ့ တပြည်ကို ကျပ် ၁၁၀၀ ထက်မပိုစေဘဲ ပြန်ရောင်း နိုင်ဖို့အတွက် အရန်ရိက္ခာဆန်တွေကို ရောင်းချပေးမယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ်က ဆိုပါတယ်။၁၀၈ ပေါင် တအိတ်ကို ကျပ် ၂၂၈၀၀ နှုန်းနဲ့ ဝယ်ယူဖို့ အဆိုပြုလာတဲ့ လက်လီဆိုင်တွေကို တကြိမ်မှာ အိတ် ၂၀၀ နှုန်းရောင်းပေးမယ်လို့ ဒီနေ့ ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။
အဲဒီလက်လီဆိုင်တွေအနေနဲ့ ဒေသကိုလိုက်ပြီး တပြည်ကို ကျပ် ၁၀၀၀၊ ၁၀၅၀ နဲ့ ၁၁၀၀ ကျပ်ထက်မပိုစေဘဲ ပြန်ရောင်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။စက်မှုဇုန်တွေက အလုပ်သမားများတဲ့ စက်ရုံတွေအနေနဲ့လည်း ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ပြန်ရောင်းတာတွေ စနစ်တကျဖြစ်စေဖို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ စားသုံးသူရေးရာ ဦးစီးဌာနတွေကနေ စစ်ဆေးကြီးကြပ်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
COVID-19 ဖြစ်နေချိန်မှာ ဆန်ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်စေဖို့၊ တောင်သူလယ်သမားတွေ စပါး စပေါ်ချိန်မှာ ဝင်ငွေ မကျစေဖို့နဲ့ ပို့ကုန်လုပ်ငန်း ပုံမှန်ဖြစ်စေဖို့အတွက် နိုင်ငံတော် အရန်ရိက္ခာဆန်တွေကို ဧပြီလကုန်ကစလို့ စုဆောင်းထားတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပြည်ပကိုဆန်နဲ့ ဆန်ကွဲ တင်ပို့တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေဆီကနေ လုံးရှည် ဧည့်မထ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းဆန်ကို ဝယ်ယူသိုလှောင်ထားခဲ့တာပါ။ဝယ်ယူလိုသူတွေအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါး ကုန်သည်အသင်း တို့ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
အမြန်လမ်းတွင် တရားမဝင်သစ် သယ်ဆောင်လာသည့် ယာဉ်တစ်စီး အား ဖမ်းဆီး
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (15-4-2020, 10:30 AM)
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ရေထဲမှာ အသက်ရှင်နိုင်သလား? ရေကနေ ကူးစက်နိုင်သလား?
ရန်ကုန်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သံသယလူနာ သုံးဦးတွေ့၊ တစ်ဦးကို ဆေးရုံမှပြန်ဆင်းခွင့်ပေး
The Sun သတင်းစာကို သရုပ်ဆောင် ဂျွန်နီဒပ် တရားစွဲ
မြန်မာလုပ်သားများလွှဲထားသည့် ကျပ်သိန်း ၆၀ လိမ်ယူပြီး တိမ်းရှောင်နေသူကို ဖမ်းမိ